हाम्रोबारे - Birat Gold Cup 2077
हाम्रो बारे मा अधिक जान्नुहोस्
सात सालको क्रान्तिकै सेरोफेरोमा समाज चलायमान भएसँगै खेलकुदले पनि आफुलाई अघि बढाउन थाल्यो । देशकै दोस्रो ठूलो सहर विराटनगरमा खेलकुदमय बनाउन इतिहासका धेरै पात्रहरूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ ।
विराटनगरमा फुटबलको विकासलाई नियाँल्ने हो भने २००७ साल अघिदेखि नै आरम्भ भएको पाईन्छ । नेपालमा फुटबलको विकासलाई नियाँलेर हेर्ने हो भने श्री ५ महेन्द्र गोल्डकपलाई फुटबलको उद्गम आधार स्तम्भको रुपमा लिन सकिन्छ ।
यो गोल्डकप २०१८ सालमा कलकत्ताबाट करिब २,००,०००।०० (अक्षरेपी दुई लाखमात्र) नेपाली रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको हो । यस गोल्डकपको दोस्रो संस्करण मोरड–११ ले जित हात पारेको थियो । सोहि प्रतियोगीताका विजेता अधिकांश खेलाडीहरू नेपाल राष्ट्रबाट प्रथमपटक बंगलादेशको आगा खाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीतामा प्रतिनिधित्व गरेका्े इतिहास छ ।
यस गोल्ड कप प्रतियोगीताका कारण मोफसलका खेलाडीहरूमध्ये मोरडका धेरै खेलाडीहरूले नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्वमात्रै होइन नेपालका अधिकांश ए डिभिजनका क्लवहरूबाट व्यवसायिक रुपमै प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको नेतृत्वबाट भएको प्रतियोगीताको आयोजनाबाट यसको गौरव बढेको पनि यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छ । प्रदेश नं. १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योगी, व्यवसायी, संघ–संस्था, खेलप्रेमी र पत्रकारहरूको निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगीता २०७७ संचालन हुन गइरहेको व्यवहोरा जानकारी गराउँछौ ।
“बिराट गोल्डकप हाम्रो गौरव” भन्ने मुल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै यस बिराट गोल्डकप प्रतियोगीतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बिराटनगर महानगरको पहिचानलााई बिस्तार गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।
२०१८ साल देखि आयोजित प्रतियोगीतालाई निरन्तरता दिई प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्ने ।
आयोजनाको स्तरलाई प्रत्येक बर्ष स्तरोन्नती गर्दै लाने ।
फुटबल खेलको बिकासका लागी युवाहरुलाई अभ्यासको व्यवस्था मिलाउने ।
उधोगी, व्यवशायी, संघ संस्थाहरुलाई खेलमा समावेश गराउने ।
प्रतियोगीतालाई अझ स्तरिय र मर्यादित बनाउन तेश्रो मुलुकका टिमहरुलाई सहभागी गराउने ।
खेल प्रेमी दर्शकहरुलाई स्वस्थ मनोरन्जन प्रदान गर्ने ।
खेलाडीहरुको खेल भावनालाई अभिबृद्धि गराउने ।
सम्भावित सहभागी टिमहरु सशस्त्र प्रहरी बल टिम, काठमाण्डौ मनाड्ड मस्र्याड्डदि क्लब, काठमाण्डौ थ्रि स्टार क्लब, ललितपुर त्रिभुवन आर्मि क्लब, काठमाण्डौ टाटा एकाडेमी, जमशेदपुुर संकटा क्लब, काठमाण्डौं गोरखा ब्याइज, रुपनदेही नेपाल पुलिस क्लब बिराटनगर ११, मोरड. झापा ११, झापा ए आर एस क्लब, क्यामरुन पंजाव पूलिस–११, पंजाव सिकिम युनाइटेड ११, सिकिम
सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी (: MAN OF THE TOURNAMENT):
उत्कृष्ट खेलाडी ( MAN OF THE MATCH) :
उत्कृष्ट प्रशिक्षक :
उत्कृष्ट गोल रक्षक
उत्कृष्ट मध्य मैदान खेलाडी
उत्कृष्ट अग्र मैदान खेलाडी
नोटः विजेता र उपविजेताको रकममा नेपाल सरकारको प्रचलित नियम अनुसार कर कट्टा गरिने छ ।
फुटबल खेलमात्र होइन एक उत्सव अनि अवसर पनि हो । मैले दशकौंसम्म यो क्षेत्रमा विताउँदा यस्तै महसुस गर्छु ।
आयोजना र सहभागिताका धेरै अध्यायलाई मैले प्रत्यक्ष नियाँल्ने अवसर पाएको छु । हरेक आयोजनाबाट हामीले केही नकेही सिकेका छौं । त्यसैले त म जस्ताका लागि फुटबल एक जीवन पनि हो भन्ने लाग्छ ।
इतिहासमा महेन्द्र र वरिवर्तित रूप विराट गोल्डकपका धेरै अध्यायमा मैले आफुलाई सक्रिय बनाएको छु । यसपटक भने मैले ट्रष्टको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पाए । यो मेरा लागि खुसीमात्र होइन चुनौतिको समय पनि हो । यसकालागि योग्य सम्झनुहुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
ट्रष्टका सदस्य साथीहरूले मलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि हामीले २०७६ सालमै गोल्डकप गर्ने निधो गरेका थियौ र, तयारी पनि सुरु भयो । आयोजनामा अघि बढेको बेला विश्वव्यापी कोरोना महामारीले हामीलाई गाज्यो, लामो लकडाउन भयो । समाज नै सिथिल बनाएकाले गोल्डकप फुटबल आयोजना पनि रोक्नु हाम्रा लागि अनिवार्य बन्यो ।
तर, ०७७ सालमा आउँदा परिस्थिति केही सहज देखियो र, हामीले पुनः आयोजनाको जमर्को ग¥यौ ।
विराट गोल्डकप इतिहासको एक धरोहर भएकाले पनि यसलाई संरक्षण, निरन्तरता दिने दायित्व आम रुपमा सबैको हो र, ट्रष्टले यसै आधारमा आयोजनाको खाका कोरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी, युुवा व्यवसायी, संचारकर्मी, खेलप्रेमी, संचारकर्मी र समाजसमेत संलग्न गराएर आयोजनामा हामी अघि बढ्यौ ।
गोल्डकपकै एक संस्करणको ‘बाँस लाइट’ ले आज प्रदेश नं. १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिकाको सहयोगमा पहिलोपटक फ्ल्ड लाइटमा खेल हुँदैछ । काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक आधुनिक फ्ल्ड लाइटको व्यवस्थापनले फुटबलमात्र होइन सबैखाले खेलप्रेमीलाई उत्साहित बनाएको छ र, हामी यसकालागि सहयोग गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
ट्रष्टको आफ्नो कार्यालय छैन, साधन र स्रोतको अभाव झेल्दै आएको सर्वविदितै छ । हामी कीम्तमा ३ कोठा र एउटा हल निर्माणमा जुटेका छौं । यसका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
यस बिराट गोेल्डकपको गौरवलाई कायम राख्दै भावी पुस्ताका लागि जीवन्त इतिहास अध्ययन गर्नका लागि पनि हामी सक्रिय छौं । ‘विराट गोल्डकप, हाम्रो गौरव’ नारा त्यसै तय भएको होइन र, आम रुपमा समाजका सबै क्षेत्रको सहयोगले मात्र आयोजना सफल हुने भएकाले उकमुष्ठ रुपमा सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।
बिराट गोल्डकप फुटबल ट्रष्ट
ऐतिहासिक विराट गोल्डकप फुटबलसित प्रत्यक्ष नेतृत्वदायी भूमिकामा जोडिन पाएकोमा म आफुलाई गौरवान्वित ठान्छु ।
ट्रष्टिजका रुपमा पहिलोपटक कार्यसमितिमा प्रवेश गरे पनि मैले विगतका केही संस्करणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता जनाउने अवसर पाएको थिए । यो आयोजनाबाट म अनविज्ञ नभएकाले मेरा लागि नौला भूमिका भने किमार्थ होइन । विगतको त्यही सहभागिताले यसपटक (२०७७) मा गोल्डकप आयोजनाका लागि मलाई ऊर्जाशील बनाउन मद्यत ग¥यो । सफलताका लागि मैले मेरातर्फबाट गर्ने सबैप्रकारका प्रयासलाई घनिभूत रुपमा आफुलाई उभ्याउने छु ।
मलाई यो अवसर दिने सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु ।
हो, हामी सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेका छौं । हाम्रो एकमात्र स्वार्थ भनेको ऐतिहासिक रुपले भब्य गोल्डकप आयोजना गर्ने हो । यसमा किञ्चित व्यक्तिगत फाइदा दृश्यमा आउने छैनन् ।
कुनै पनि आयोजना एक्लैले सफल हुँदैन र, गोल्डकप फुटबल जस्तो भब्य आयोजनाका लागि सशक्त टिम चाहिन्छ । यो एक ‘टिम वर्क’ हो र, मैले पनि आफुलाई सशक्त र मजबुत टिमसहितको व्यवस्थापनमा ढाल्ने प्रयास गरेको छु । हामीले आयोजनाका मिहीन कुरालाई समेत केलाएर कुनै समस्या नआउन भन्ने तर्फ सतर्क अनि सजग छौं ।
ट्रष्टमा रहनुभएका सबैमध्ये उमेरले कान्छो भएकैले अग्रज जम्मैको सहयोग, मार्गनिर्देशन पाउनेमा आशावादी छु ।
कोरोना कहर जारी रहेको र समाज केही खुकुलो भएको बेला हुन लागेको गोल्डकप पक्कै पनि सहज छैन । यसका लागि मैले चुनौतिपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु । पक्कै पनि कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । समाज विस्तारै चलायमान हुन अग्रसर हुँदैछ । गोल्डकपको आयोजनाले समाजमा धेरै आयामहरूलाई परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।
म होइन हामी भन्ने भावनाका साथ अघि बढेका हामीलाई सबैबाट पूर्ण सहयोगको आवश्यकताछ । हामी गोल्डकपको माध्यमबाट समाजलाई जोड्ने प्रयास गदैर्छौ ।
आयोजना सहज छैन र, २ महिनासम्म सबै काम छाडेर यसमा समय दिनुपर्छ । यदि इतिहासले छाडेको विरासतलाई हामीले अंगीकारगर्दै सकारात्मक सोचतर्फ अघि नबढ्ने हो भने भविष्यले पनि हामीलाई सम्मान गर्ने छैन । इतिहासको यस्तै एक संस्करणलाई सफलताको टाकुरामा पु¥याउन मैले बलबुताले भ्याएँसम्म काम गर्नेछु । सबैबाट यस्तै आशा पनि राखेको छु ।
मनोज बिक्रम शाह
बिराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगीता २०७७
© Copyright 2021 - Biratgoldcup Football Trust - All Rights Reserved
Development: Proudly Collaboration Between ITSN & OB media